Nezvedu | KUSVIRA
Sangano Rokurwisa Dzidziso Dzepabonde Dzakashata
CAUSE "Kumirira kodzero dzevabereki"
CAUSE (Coalition Against Isingavhiringidzwe Dzebonde) yakaitwa muna Ndira 2018 kubatanidza mapoka akasiyana akaumba nekuda kwevabereki vazhinji vachipindura kuburitswa kwezvinhu zvisina kukodzera zviri muComprehensive Zvepabonde Dzidzo yakadai sedzakatanga kudaidzwa kuti Zvikoro Zvakachengeteka, chirongwa chakaitwa muzvikoro pasi chirevo chekuva chirongwa chekurwisa kudheerera. Nekudaro, chirongwa chisina kukodzera pabonde chakagadzirirwa kudzidzisa vadzidzi mune zvisina kufanira muvatano. Nekuda kwekumwe kushushikana neruzhinji rwekare chirongwa ichi chakadzoserwa kakati wandei uye chikaiswa muzvikoro pasi pemazita akasiyana siyana. Asi pfungwa dzakakosha uye zvinangwa zvinoramba zvakadaro.
Chirongwa ichi hachina kukodzera kupihwa kuvadzidzi vepuraimari kana sekondari. Iri ine zvigadzirwa uye pfungwa dzebonde, inodzidziswa isina hunhu, ichikurudzira vadzidzi kuti vaedze kuita kwavo zvepabonde. Chirongwa ichi chakaitwa pamusoro pezvose zvidzidzo zvekuti hazvibviri kubvisa mudzidzi pane zviri muchirongwa ichi pasina kukanganisa kudzidza kwavo.
Icho chinangwa cheCISUSE kuita kuti veruzhinji vazive zvirimo muchirongwa ichi nenzira chero ipi inobudirira uye yakakodzera, nechinangwa chekupedzisira chekuona kuti vanopa dzidzo vanobvisa chose chirongwa ichi vatsiva chirongwa chechokwadi chekurwisa kudheerera. CAUSE inotarisira kutevedzera kodzero dzevabereki, apo chero zvirongwa zvepachikoro zvinove zvepabonde zviri pachena kune vabereki. Kuve zvakare nechokwadi chekuti chero zvirongwa zvebonde zviri muchimiro umo vabereki vanochengetedza kodzero dzose, vasingasarure vana vavo kudzidza, kubvisa vana vavo mumakirasi akadaro nepfungwa yavo.
Isu tinosimbirawo kuti, mukati memutemo weAustralia, vanhu vese vane kodzero yekurarama hupenyu hwavo sezvavanoda.